Google Duplex: Kutaura neRobot parunhare (uye Kusacherekedza) | Kudzidziswa Kwekuziva
Google Duplex: kutaura parunhare ne robhoti (uye usingazive)
Vazhinji vedu, kuteerera uku kudana (muChirungu), havazo cherechedze chinhu chinoshamisa: munhu anoverengera musangano musangano wevhudzi. Dambudziko nderekuti chimwe chinhu chinoshamisa chinofanira kunge chiripo, sezvo isu tiri kuteerera kune chimwe kutaura chaiko-nguva pakati pemunhu munhu nemuchina.
Zaruriro yakashamisa munhu wese nekuti, kusiyana nedzimwe nzvimbo (senge kuzivikanwa kwevanhu), maumbirwo ehungwaru ehunyanzvi agara achiwana miganho mikuru mukunzwisisa nekugadzirwa kwemitauro yemuromo, zvekuti nzvimbo ino yakagadziriswa sedambudziko chairo 'njere dzekunyepedzera. Mushure mezvose, zvinotora tese masekondi mashoma kuti tizive chaiyo foni kubva kune yakaitwa nezwi rakanyorwa. Kana zvirinani, kusvikira zvino.
Mugwaro rekuratidzira ra Google Duplex (Iri izita rehunyanzvi) isu tichacherechedza Matambudziko mazhinji akasangana nevagadziri (zvirinani, kuzvigadzirisa) uye kuti isu vanoshanda mumunda wekutaurirana nemazwi tinoziva chaizvo:
Kusiyana nekutsvaga kweGoogle, kuchengetwa kwenzwi kwakanyanya savazvo: ine kuzengurira, mazwi akadzokororwa kanoverengeka, kuzvigadzirisa. Rimwe remabasa emuchina saka "kuchenesa" chiratidzo uye kubvisa izvo zvemukati zvemashoko
Vanhu vanowanzo taura nekukurumidza uye pavanenge vari parunhare, vanogona kuve neruzha rwepashure. Rimwe basa remuchina zvakadaro kuziva uye kuzviparadzanisa iyo meseji
Zvemukati zvinogona zvakawanda: semumuenzaniso wakapihwa neGoogle peji, muChirungu "Ok for 4" zvinogona kureva "Ok ye4: oo" kana "Ok yevanhu vana". Basa remuchina nekudaro kuziva uye kusiyanisa aya mamiriro anogona kuitika
Ziva zvimiro zvacho pragmatic: dzimwe nguva muchina unofanirwa kupindura nezviito kukumbira kwakajeka, semuenzaniso "Unogona kumirira kweminiti here?", "Unogona kudzokorora?", "Unogona here kuiti tsamba netsamba?"
Zvinofadza, chokwadi chekuti, kutarisa zvakanyanya zvakasikwa, hurongwa hunofanirwa kuve hwakanyanya: "musikana" uyo anoita musangano anoshandisa kupokana, kuzeza uye kugadzirisa kwechinangwa chega chekutarisa zvakasikwa.
Rombo rakanaka isu, Duplex inofanirwa kuzvizivisa se robhoti usati watanga kutaura nhare nesu.
Icho chokwadi chinosara icho kuwanikwa kwakaitwa kukurira matambudziko ese akatsanangurwa pamusoro apa kunogona kukanganisa zvikuru mhando dzekunzwisisa uye kugadzirwa kwemitauro.
Google Duplex: kutaura parunhare ne robhoti (uye usingazive)2018-05-142020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/05/hand-3308188_960_720.jpg200px200px
Computerized kudzidziswa kwekushanda kurangarira: zvakanakira aphasiaKushanda ndangariro, Neuropsychology, Nyowani matekinoroji
Nhau dzakanaka: kuverenga kwakabatanidzwa kunoshanda (kunyanya izwi remadimikira)Zvinyorwa, mutauro, wevabereki